Dubbii himaa barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Juriik (suuraa faayilii)
Dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Juriik Kamiisa kaleessaa ibsa kennaniin,gargaarsii dhala namaa kan Tigraay dhaqqabuu qabu hanga ta’u malee akka hin taane, yaliin jiru martii lubbuu namaa olchuu fi waan gaddisiisaa guddaa uummata irra ga’u ittisuu dha jedhan.
Qooda nu irraa eegamuu gumaachuuf akkasumas mootummaa Itiyoophiyaa fi michoota keenya waliin hojjachuun, uummata miliyoona hedduu Tigraay, Afaarii, naannoo Amaaraa akkasumas guutuummaa biyyatti keessaa deggeruuf hojjachuu itti fuufna jedhan.
Barreeessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Gutarrees, danqaa tokko malee kana gochuu akka dandeenyuuf, akkasumas ariitii haallii jiru gaafata jiruun akka dhaqqabnuuf, mootummaa Itiyoophiyaa gaafanna jedhan.Hojjattonni keenya kan gargaarsaa akka jedhanti, karaa tokkitti jiru kan gama Afaariin Tigraay dhaqqabanii gargaarsa dhala namaa raabsuun akkaan daangeeffamaa taasisee jedhan.
Torban dabree kokolaataa fe’umsaa 80tu nyaata, waan qaama gabbisanii fi gargaarsa ka biroo fe’uun Tigraay seene.Garu akkuuma ammaan dura dubbataa turre gargaarsa barbaachisuu achiin ga’uuf guyyaatti kokolaataa 100 erguu qabna jedhan.
Kan akkaan barbaachisaa ta’an boba’aa fi dawaalee erga baatii Adooleessa darbee kaasee akka Tigraay seenu hin ehamamnee ibsanii balaliin xayyaaraa kan gamtaaa Awuroopaa inni 2ffan gargaarsa nyaataa fi kannen biroo Tonii 10.6 fe’ee kaleessa Tigraay seene jira jedhan.
Kanas kan simannee ta’uus isa barbaachisu irraa baayyee xiqqoo ta’u ibsiina jedhan Juriik.Gabaa irraa waan jireenyaaf barbaachisuu dhabamuun akkasumas yoo jiraate illee gatii guddaa kan gaafatu ta’u ibsuun, fakkeenyaaf Maqalee keessatti Zayiitnii nyaata ittiin bilcheeffata harka 433 dabaluu ibsan.
Haqiina waan jireenyaaf barbaaachisuu akkasumas kan boba’aa fi maallaqaa kanaaf jecha michoonni waliin hojjannuu fi nutiis, waan hattamaa Tigraay Afaar fi bulchiinsa Amaaraa keessa jiruuf deebii kennaa jirra jedhan.
Erga baatii Hagayyaa darbee qabee uummata 440,000 caaluu bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti akkasumas uummata kuma 72 bulchiinsa naannoo Afaar keessatti nyaata raabsinee jirra jedhan.